७९ डीएसपीको सरुवा, को-को कहाँ कहाँ परे ? (सुचिसहित) – Fewa Times
७९ डीएसपीको सरुवा, को-को कहाँ कहाँ परे ? (सुचिसहित)
प्रकाशित मिति: August 16, 2019 12:31 pm
काठमाडौँ – प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७९ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपीको सरुवा गरेको छ। भदौ महिनाबाटै सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेगरी बिहीबार देशभरका ७९ प्रहरी नायव उपरीक्षकको सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले भदौ महनिादेखिको तलबभत्ता समेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।